အဘယ်အရာကို Soulsex နှင့်မည်သို့ပတ်လည်ထားရန်အကြောင်းကိုအထူးပါသလဲ
ဘယ်လို Soulsex သနည်း
လိင်မပိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့, သူတို့သည်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, က, ပျင်းစရာကောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အစွဲအလမ်းမထားဘဲပါပဲ။ အလုပ်ပြီးနောက်နှုတ်ဆက်နမ်းတကယ်နီးပါးမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ခုခုကိုမလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်။
ဝိရောဓိ, နှစ်ယောက်မိတ်ဖက်ညီမျှဖြစ်ပါသည်: သူတို့ကသင်တန်း၏, လိင်အဘို့, ချစ်ခင်စုံမက်, စိတ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုချိတ်ဆက်မှုအတွက်ဤမျှလောက်တောင့်။ ရုံဖက်အတူကြောင့်ဝေးသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပုံရသည်မဟုတ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘို့လျှင် Soulsex ထပ်တူညီလူတွေကိုရန်စိတ်အားထက်သန်မှမြင့်တက်ပေးခြင်းတစ်လမ်းရှိနိုင်ပါသည်။
အစဉ်အဆက်ထက် Soulsex မိတ်ဖက်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူ
ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ဇာတ်ခင်း၏အစအဦးမှာဗို့အားရှိထင်ရသောအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ကျောကိုဖက်ပေးသူလုပ်နိုင်ဘာမှခဲလည်းမရှိ, ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုကိုမတှေ့ဘူး။
နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားရှုထောင့်ကနေသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုကြည့်ဖို့လျော့နည်းအခွင့်အလမ်းရှိသည် - မရှိတော့သူတို့ရဲ့စိတ် operated နိုင်ပါတယ်သောနေ့၌ဥပမာ demented လူနာချအလားတူအပြုအမူ။ သူနာပြုအိမ်တွေမှာသူနာပြုများပင် Auto-ခေါ်ဆောင်သွားအသိပါလျှင်, ထိုနေထိုင်သူများအများအပြားလိင်တက်ကြွဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ပါ။
လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒဒါပင်တစ်မြုံ ပူးပေါင်း. လည်းမရှိ။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်ကစားထဲသို့အလေ့အထလာစိတ်ကိုပေါ်လှည့် - သူမူလကဝေဖန်ခြင်းငှါအလိုရှိသောအခါပိုပြီး Dash စေသည်။ ထုံးစံအနမ်းဖြစ်ကောင်းကအကြောင်းကြောင်း brooding မှာမကောင်းမခံစားရပေမယ့်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုအခြားအကြောင်းအရာကိုညှိုးနွမ်းထွက်ခွာမည်။
လူတိုင်းကကိုယ့်အကြောင်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ခဲ့ဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုသတိရပေမယ့်မိတ်ဖက်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာကွန်နက်ရှင်။ အထူးသဖြင့်မေတ္တာအစစ်အမှန်နဲ့ဘယ်မှာမျှအလေ့အထရှိပါတယ်ဖြစ်သည့်အတွက်အသစ်စတင်ဆက်ဆံရေးအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိ၏ဤရှုထောင့်တတ်။ ဤသည်သူမ၏စာအုပ်၌အဘယျစာရေးဆရာအီဗာ-မာရီယာ Zurhorst ဖြစ်ပါတယ် "Soul လိင် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတ္တာတော်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်" နှစျခြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာဘာလဲ, ကြှနျုပျတို့လိင်ဒီလိုမျိုးအတွက်ဒါကောင်းသောအမှုကိုပြုဘာလဲ? ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူးသောအရာကိုဖျောပွနိုငျဘယ်လောက်လည်းတိုင်းထိသည်ကောင်းလမ်းကိုဖွင့်နှင့်။ နယူးမိတ်ဖက်ပထမဦးဆုံးသိကြရများနှင့်ယခုအဘယ်အရာကို likes နှင့်နှစ်သက်ရာကိုကြေညာဖို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့အဘို့ကောင်းသောအရာကိုသူ / သူမ likes နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အဆက်အသွယ်အချက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဤကိစ်စတှငျအခြားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ဦးချင်းစီမိတ်ဖက်များ၏အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုလည်းမိတ်ဖက်ပဲထိထိမိမိဖြစ်လိမ့်မည်ရှိရာနောက်တဖန်, မေတ္တာသည်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးဖြစ်နေဆဲရေရှည်ဆက်ဆံရေးသင်တန်းအတွက် re-ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Soulsex ဒါနှစ်သက်ဖွယ်သော, အဖက်များနှင့်၎င်းတို့၏ပေါ်ထွန်းထကြွလာသောရငျးနှီးမှု၏လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်ဆန္ဒ၏အစဉ်အဆက်သစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ - တစ်ဦးကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လည်းသိတယ်တဦးတည်းသလောက်မရှိ။
လူငယ်စုံတွဲ - နူးညံ့ကြင်နာမှု
Soulsex ပင်လူတိုင်းနှင့်အတူစတင်သည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှုတ်ဆက်ခြင်းအနမ်းမှာကယ့်ကိုအဆင်ပြေခံစားရသလော
ဒါကြောင့်ဆိုရင်သူတို့ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ သူတို့ကပိုတင်းမာမှုနှင့်အကွာအဝေးမှမြင့်တက်ပေးလျှင်မူကား, ကအဆင်ပြေရဲ့မိတ်ဖက်ပြောကြပါတယ်။ သူကအပြစ်တင်ဖို့မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အချက်ကိုနမ်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြင်းထန်သော။ စစ်မှန်သော။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကတစျခုလုံးကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်မအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သတိအများအပြားစုံတွဲများနှင့်လူများနေဆဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတူတူကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကကိုင်စွဲဖို့ကအရေးကြီးတယ် - သင့်မိတ်ဖက်ပြောပြနှငျ့သငျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေကိုပြသရန်အညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါဟာမဆိုရိုင်းဝတ်စုံသို့မဟုတ်မသက်မသာ Thong ကိုရည်ညွှန်းသည်, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းကို "နယူး" ဟုအဆိုပါလိင်ဘဝတက်မြိန်ပါတယ်။ ဒါဟာလိင်စဉ်အတွင်းအလိုရှိသောခံရဖို့ရိုးရိုးပါပဲ။ ဆက်သွယ်ဖို့တစ်ခုမှာဖက်။ နှင့်အပြန်အလှန် - အခြားမိတ်ဖက်ဟာသူတို့ရဲ့ပွညျ့စုံ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။
အတူတကွမိတျဆှေဒါမှမဟုတ်ရည်းစားနှင့်အတူ Baden | ကာမ
အတူတူက၎င်း၏မိတ်ဖက်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အတူ | အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိတ်ဖက်
ခေါ်ဆောင်သွားကဗျာတစ်ပုဒ် | ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အရွယ်ရောက်မိတ်ဖက်